Keeniyaatti harroonni 'guutumaatti baduutti dhiyaachuun' yaaddoo uume - BBC News Afaan Oromoo
Keeniyaatti harroonni 'guutumaatti baduutti dhiyaachuun' yaaddoo uume
Keeniyaatti harroonni 'guutumaatti baduutti dhiyaachuun' yaaddoo uumaa akka jiru gabaafame.
Baayyinni harrootaa Keeniyaa keessa jiran akka malee saffisaan hir'achaa dhufuu gabaasni gabaasni dhimma kana irratti fuulleeffate garee mirgoota beeyaladaan dhiyaate akeekeera.
Dhaabbanni Africa Network for Animal Welfare (ANAW) jedhamu wiirtuu isaa Keeniyaa godhate akka agarsiisetti harroonni gara malee lakkoofsi isaanii xiqqaachaa waan dhufeef 'ciraan' isaanii lafarraa baduuf jiru sodaa jedhu uumeera.
Gandi gaalonni 100 takkaatti jalaa dhuman gaddatti jirti
Imbaasiin Faransaay harree Burundiif arjoomuun balaaleffatame
Gabaasni kun akka dhiyeessaa jirutti manneen daldalaa foon harree qalanii qopheessan afur ta'an bara 2016 keessa Keeniyaatti banamanii booda, "lakkoofsi harrootaa baayyisee guddaa ta'e guyyaa guyyaan qalamaa jiru."
Gabaasichi akka tilmaametti guyyaa guyyaan harroonni 410 ta'an qalamaa jiru.
Dhaabbanni ANAW jedhamu kun akka jedhutti fedhiin gogaa harrootaa Chaayinaarraa dhufaa jira.
Gabaasni dhaabbanni kun amma dhiyeessa yaaddoo kanaan dura bara 2017 keessa dhiyaatee ture cimseera.
Yeroo sanatti BBC'n akka gabaasetti namoonni harroonni isaanii jalaa hatamanii gabaa keessatti fedhii dabalaa dhufe geesisuuf dhiyaatu ture.
Haata'u malee, hoji gaggeessaan mana qalii tokko akkas jedha: "Nuti Chaayinootatti ni gammdna sababiin isaas duraan harreerraa wanti argamaa ture hin jiru duraan. Amma agruu namoonni hedduun harrootarraa bu'aa hedduu argaachaa jiru."
ANAW akka jedhutti "hawaasni jiruu isaaniif harrootarratti hundaa'an...rakkoon waan isaan mudatuuf jiruuf abdii kutaa jiru.
Gabaasichi akka agarsiisetti baayyinni harroota Keeniyaa keessa jiranii 900,000 hanag miliyoona 1.8 tti tilmaamamu.
Imbaasiin Faransaay harree Burundiif arjoomuun 'arrabsoodha' jedhame
Viidiyoo Abbaa qabeenyummaa irraa gara harka namaa ilaaluutti